အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်မှု ပုံစံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အချက် (14) ချက် - ThutaStar
October 2, 2019 Thuta Star အလှပရေးရာ 0
“ကပေကရေ အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်တဲ့အခါ လူတွေက အဝတ်အစားတွေကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ် ။ ကြော့ကြော့မော့မော့ ဝတ်တဲ့အခါ လူတွေက သင့်ကို သတိထားမိလိမ့်မယ်”လို့ Coco Chanelက ပြောပါတယ် ။ အဝတ်အစားကလည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ် ။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမိ တွေ့မယ်ဆိုရင် ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါသေးတယ် ။
1.ကုတ်ရဲ့ အလယ်ကြယ်သီးတွေကို အမြဲ တပ်ထားသင့်ပါတယ် ။ အပေါ်ကြယ်သီးကိုတော့ မတပ်ချင်ရင်လည်း ရပါတယ် ။ အောက်ကြယ်သီးကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မတပ်ထားသင့်ပါဘူး ။
2. ရှပ်ကို ဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘလောက်စ်ကို ဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြယ်သီး နှစ်လုံးထက်ပိုပြီး မဖြုတ်သင့်ပါဘူး ။
3. နားကပ်ကို လက်ကောက် ၊ ဆွဲကြိုး ၊ လက်စွပ်တို့နဲ့ ဆင်တူဝတ်တာက သိပ် ကြည့်မလှပါဘူး ။4မျိုးဝတ်ရင်3မျိုးလောက် ဆင်တူတာက ကြည့်ကောင်းပါတယ် ။
4. နက်တိုင်ရဲ့ အစွန်းက ခါးပေါ်မှာ အနည်းငယ် ရှိနေသင့်ပါတယ် ။
5. Miniskirt ဒါမှမဟုတ် ရင်ဟိုက်တဲ့ ဝတ်စုံကို ရွေးဝတ်ပါ ။ skirt က တိုပြီး ရင် ဟိုက်နေတဲ့အခါ အမြင် ရိုင်းစေပါတယ် ။
6. ရှပ်အပေါ်မှာ ကုတ်ထပ် မဝတ်တော့ဘူးဆိုရင် နက်တိုင် စည်းစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။
7. ရုံးမှာဝတ်တဲ့ ရှပ်က လည်ပင်း ညှပ်ရိုးရဲ့အောက်4လက်မထက် ပိုပြီး မဟိုက်သင့်ပါဘူး ။
8. ရှပ်ဝတ်တဲ့အခါ ခါးပတ် ပတ်သင့်ပါတယ် ။
9. ရင်ကွဲ သိုးမွှေးအက်ျီ နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကြားမှာ အသားကို မဖော်ထားသင့်ပါဘူး ။
10. ခါးပတ်ကို ဖိနပ်နဲ့ အရောင်တူတာကို ရွေးပါ ။
11. အက်ျီပေါ်က တံဆိပ်တွေ အားလုံးကို ခွာပြီးမှ ဝတ်ပါ ။
12. အပွင့်တွေ အများကြီးပါတာက ကြည့်မလှပါဘူး ။ အပွင့်တွေ အများကြီး ပါတာကို ဝတ်ချင်ရင် အရောင် သိပ်မကွဲတာကို ရွေးသင့်ပါတယ် ။
13.ထိုင်နေတဲ့အခါ ခြေထောက်အသားကို မမြင်ရအောင်အထိ ခြေအိတ်ကို ရှည်ရှည် ဝတ်သင့်ပါတယ် ။
14. ရုံးတက်တဲ့အခါ ပုခုံးဖုံးတဲ့ အက်ျီကိုသာ ဝတ်သင့်ပါတယ် ။ အက်ျီလက်လည်းမပါ ၊ ပုခုံးလည်း မြင်နေရတဲ့ အက်ျီက အပြင် ထွက်လည်တဲ့အခါ အဆင်ပြေပါတယ် ။
Credit; Love အတိုစလေးများ
“ကပကရေေ အဝတအြစားတှကေို ဝတတြဲ့အခါ လူတှကေ အဝတအြစားတှကေို သတိထားမိပါလိမြ့မယြ ။ ကှော့ကှော့မော့မော့ ဝတတြဲ့အခါ လူတှကေ သငြ့ကို သတိထားမိလိမြ့မယြ”လို့ Coco Chanelက ပှောပါတယြ ။ အဝတအြစားကလညြး လူတစယြောကရြဲ့ ပုံရိပအြတှကြ အလှနအြရေးကှီးပါတယြ ။ တစယြောကယြောကနြဲ့ ပထမဆုံးအကှိမိ တှမေ့ယဆြိုရငြ ပိုလို့တောငြ အရေးကှီးပါသေးတယြ ။
1.ကုတရြဲ့ အလယကြှယသြီးတှကေို အမှဲ တပထြားသငြ့ပါတယြ ။ အပေါကြှယသြီးကိုတော့ မတပခြငွရြငလြညြး ရပါတယြ ။ အောကကြှယသြီးကိုတော့ ဘယတြော့မှ မတပထြားသငြ့ပါဘူး ။
2. ရှပကြို ဝတတြာပဲဖှစဖြှစြ ၊ ဘလောကစြကြို ဝတတြာပဲဖှစဖြှစြ ကှယသြီး နှစလြုံးထကပြိုပှီး မဖှုတသြငြ့ပါဘူး ။
3. နားကပကြို လကကြောကြ ၊ ဆှဲကှိုး ၊ လကစြှပတြို့နဲ့ ဆငတြူဝတတြာက သိပြ ကှညြ့မလှပါဘူး ။4မွိုးဝတရြငြ3မွိုးလောကြ ဆငတြူတာက ကှညြ့ကောငြးပါတယြ ။
4. နကတြိုငရြဲ့ အစှနြးက ခါးပေါမြှာ အနညြးငယြ ရှိနသငြေ့ပါတယြ ။
5. Miniskirt ဒါမှမဟုတြ ရငဟြိုကတြဲ့ ဝတစြုံကို ရှေးဝတပြါ ။ skirt က တိုပှီး ရငြ ဟိုကနြတေဲ့အခါ အမှငြ ရိုငြးစပေါတယြ ။
6. ရှပအြပေါမြှာ ကုတထြပြ မဝတတြော့ဘူးဆိုရငြ နကတြိုငြ စညြးစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။
7. ရုံးမှာဝတတြဲ့ ရှပကြ လညပြငြး ညှပရြိုးရဲ့အောကြ4လကမြထကြ ပိုပှီး မဟိုကသြငြ့ပါဘူး ။
8. ရှပဝြတတြဲ့အခါ ခါးပတြ ပတသြငြ့ပါတယြ ။
9. ရငကြှဲ သိုးမှေးအကြွီ နဲ့ ဂငြွးဘောငြးဘီကှားမှာ အသားကို မဖောထြားသငြ့ပါဘူး ။
10. ခါးပတကြို ဖိနပနြဲ့ အရောငတြူတာကို ရှေးပါ ။
11. အကြွီပေါကြ တံဆိပတြှေ အားလုံးကို ခှာပှီးမှ ဝတပြါ ။
12. အပှငြ့တှေ အမွားကှီးပါတာက ကှညြ့မလှပါဘူး ။ အပှငြ့တှေ အမွားကှီး ပါတာကို ဝတခြငွရြငြ အရောငြ သိပမြကှဲတာကို ရှေးသငြ့ပါတယြ ။
13.ထိုငနြတေဲ့အခါ ခှထေောကအြသားကို မမှငရြအောငအြထိ ခှအေိတကြို ရှညရြှညြ ဝတသြငြ့ပါတယြ ။
14. ရုံးတကတြဲ့အခါ ပုခုံးဖုံးတဲ့ အကြွီကိုသာ ဝတသြငြ့ပါတယြ ။ အကြွီလကလြညြးမပါ ၊ ပုခုံးလညြး မှငနြရတေဲ့ အကြွီက အပှငြ ထှကလြညတြဲ့အခါ အဆငပြှပေါတယြ ။
Zombie ( Love အတိုစလေးမွား )
Credit; Love အတိုစလေးမွား